हाम्रा दिदीवहिनीलाई कंगोमा लगेर नाङ्गै नचाउने ,अनि लोकतन्त्रको गफ हाँक्ने ? – Nirantarkhabar
हाम्रा दिदीवहिनीलाई कंगोमा लगेर नाङ्गै नचाउने ,अनि लोकतन्त्रको गफ हाँक्ने ?
प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी कसैलाई भन्न बाँकी राख्दैनन् । आफैलाई आमन्त्रण गरेर बोलाउने आयोजकलाई होस वा मञ्चमा सँगै बसेका वरिष्ठ कनिष्ठ नेता । सँगै बसेका शक्तिशाली दलका अध्यक्ष वा सभापति हुन वा प्रधानमन्त्री नै, डाक्टर केसीका शव्दबाणले नघोचिएका व्यक्ति सायदै होलान् । विशेष गरी नेतागणले दहै्र हिम्मत बोकेर केसीको भनाई सुन्न बस्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो पुर्व तयारीका साथ ।
शुक्रबार इटहरीमा राष्ट्रिय एकीकरण दिवस समारोह आयोजना गरियो । प्रमुख बक्ता थिए । डाक्टर सुरेन्द्र केसी । इतिहाँस विषयका प्राध्यापक समेत रहेका केसीलाई पृथ्वीनारायण र उनीसँगको ऐतिहासिकता सुन्ने उद्देश्यले आयोजकले बोलाएको थियो । बर्तमानको विष्लेषण र गलत विषयको भण्डाफोर डाक्टर केसीको विषेशता नै भैहाल्यो ।
पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बोलीरहँदा केसीले अहिलेका नेता र उ बेलाका पृथ्वीनारायणको धेरैपटक तुलना गरे । अहिलेका नेताहरु स्वार्थमा चुर्लुम्मै डुबेर आफ्ना आफन्त छोरीबुहारीलाई मात्रै काखी च्याप्ने गरेको भएपनि पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो सोच कहिल्यै नराखेको उनले बताए । ‘क्षमता हुनेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पृथ्वीनारायण सचेत थिए ।’ डाक्टर केसीले भने‘अहिलेका नेतालाई हेरौं त सबै आफ्नालाई च्याप्छन् । त्यसैले अहिले पनि पृथ्वीनारायणलाइ सम्झनुपर्ने उनकै गुणगान गाउनुपर्ने आवश्यकता परेको हो ।’
साक्षर मात्रै रहेका पृथ्वीनारायण शाहको जति चेतना अहिलेका नेतामा भैदिएको भए जनताले यस्तो दुख पाउनुपर्ने अवस्था नै नआउने उनले बताए ।‘पिएचडी सम्म गरेका नेता पनि यो देशका प्रधानमन्त्री भए तर तर अक्षरमात्रै चिनेका पृथ्वीनारायणमा जतिको चेतना यी नेतामा पटक्कै देखिएन ।’ केसीले भने ।अहिलेपनि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको ङभारी रहेको भन्दै लोकतन्त्रको गफ हाँक्ने नेताले जनताको मर्म बुझ्न नसकेको बताए ।‘हाम्रा छोराछोरी अरबमा लगेर कटाउने । हाम्रा दिदिबहनीलाई कंगोमा लगेर नाङ्गै नचाउने अनि लोकतन्त्रको धाक दिने?’ डाक्टर केसीको प्रश्न थियो‘हामी माथी कसरी ऋणको भारी थपियो यसवापत हामीले के सुविधा लियौ? यसको जवाफ चाहिन्छ ।’
पृथ्वीनारायण शाहको धर्म निति सबैलाई प्रोत्साहन गर्ने र जोगाउने पक्षमा रहेको केसीले बताए ।
कार्यक्रममा डाक्टर राजेश अहिराजले पनि पृथ्वीनारायणको एकीकरण अभियान र दिव्यपोदेशबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय एकीकरण दिवस मुल समारोह समितिले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
झापा–११ फाल्गुनन्द गोल्डकपको फाइनलमा
स्व–विकास व्यवस्थापन तथा प्रस्तावना लेखन तालिम सम्पन्न